Shiinaha La tuuro Video Laryngoscope oo loogu talagalay warshadda Intubation iyo alaab-qeybiyeyaasha. Biotek
Koodhka alaabta: BOT-VL 600
Codsiga: waxaa loo adeegsadaa isku-xirnaanta hawo-mareenka joogtada ah ee adag ee suuxdinta kiliinikada iyo badbaadinta degdegga ah.
≥ 200 daqiiqo
Muuqaalka Crystal Liquid
220 ° （Hore / Dib）
(Sare / Hoos)
180 ° (Bidix / Midig)
CMOS ＞ 2.0 Milyan Pixels
Batariga Lithium ee dib loo soo celin karo
Soo galinta xeedho
Soo saarida xeedho
Mashiinkaani wuxuu leeyahay faa iidooyinka naqshadeynta casriga ah, muuqaalka quruxda badan, cabirka yar, qaadista, howlaha oo dhameystiran iyo isticmaalka fudud.
Mashiinkani waa laryngoscope muuqaal ah oo caafimaad oo isku dhafan shaqooyinka, qaadista, waxqabadka, adkeysiga iyo sare
qaabeynta, waa dawaarle loo sameeyay damiirka dadka! Waa qalab waxbarasho oo ku habboon gargaarka degdegga ah ee isbitaalka, bukaan socod eegtada
arjiga iyo isku-buuqinta trachea intabation Lead-in teaching.
1. Iyadoo saxsan, geedi socodka wax soo saarka caaryada oo buuxa, xoojinta birta aan lahayn, ma fududa
dhaawac, nolol dheer;
2. Iyada oo leh 3 inch shaashadda muujinta midabka 'TFT', xagal ballaadhan oo wareegsan kor iyo hoos, bidix iyo midig;
3. Mashiinka wuxuu qaataa batari-ga weyn ee lithium-ka laga keeno, wuxuu soconayaa in ka badan 300 daqiiqo;
4. Iyada oo leh sawirro, fiidiyoow, barafow iyo hawlo kale, oo keydin kara oo dhoofin kara;
5. Unique anti anti function function, taasi waa, furid iyo adeegsi, kululayn la'aan, qubasho la'aan indhoole
Hore: Wadada mareenka laryngeal maaskaro ee lumen laba jeer la tuuro iyo silikoon lma ee suuxdinta